Ciidamada Police-ka DKMG ah oo Baaritaano xoogleh ka wada Muqdisho – SBC
Ciidamada Police-ka DKMG ah oo Baaritaano xoogleh ka wada Muqdisho
Muqdisho- Ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa howlo baaritaana ah waxay ka wadaan wadada Maka Almukarama ama wadada dheer ee isku xirta xaruta madaxtooyada iyo Airportska magaalada Muqdisho taas oo badi ay isticmaalaan ciidamada Amisom iyo madaxda dowlada KMG ah .
Ciidamada Police-ka Dowlada KMG ah oo ku hubeysan Hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka Police-ka ayaa lagu arki karaa wadadaas iyagoo howlahooda baaritaan ka fulinaya islamarkaana Gaadiidka dadweynaha ka soo jinaya dadka kadibna ku sameynaya baaritaan.
Howlkan baaritaan ee ay wadaan ciidamada ayaa u muuqanaya mid aad iyo u baraalan, waxaana la xaqijin Karin sababta kaliftay iyo waxa ay ku yimaadeen howlgaladan, inkastoo warar la isla dhexmarayo ay sheegayaan in baaritaankan lagula danleeyahay dadka iyagu ka imanaya ama tagaya suuqa bakaaraha .
Ma jiraan cid ka tirsan saraakiisha ciidamada Police-ka oo ka hadlay baaritaanadan xoogan kuwaas oo faah faahin ka bixinaya howlahan, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ay barqo nimadan sii baaheen howlgalada.
Cali Maxamed Axmed Lucky Man